जिकज्याक मोटरसाईकल चलाएर चालकसंग निउ खोज्ने ६ जना पक्राउ : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश १ जिकज्याक मोटरसाईकल चलाएर चालकसंग निउ खोज्ने ६ जना पक्राउ
धनकुटा । धनकुटामा दादागिरी देखाएको आरोपमा ६ जना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ मालवासेस्थित कोशी राजमार्गमा सवारी साधनलाई रोकेर हुल हुज्जत तथा अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीले युवाहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा महालक्ष्मी–१ घर भई धनकुटा–६ पात्ले बस्दै आएका २४ बर्षीय दिपक खड्का, तेह्रथुमको छथर–२ घर भई धनकुटा–९ बस्दै आएका २२ बर्षीय रामकुमार लिम्बु, धनकुटा–९ गुठिटारका १९ बर्षीय आर्यन राई, गुठिटारकै १९ बर्षीय प्रदिप चाम्लिङ्ग, धनकुटा–९ वेलहारावेसीका २३ बर्षीय दिलबहादुर दाहाल र सहिदभूमि–७ खाल्लेका २३ बर्षीय कृष्ण राई छन् ।
उनीहरुले बुधबार साँझ साढे ७ बजे मालवासेमा ट्रकलाई रोकेर अनावश्यक बखेडा झिकी दादागिरी देखाउँदै चालकलाई अभद्र व्यवहार गरेकाले पक्राउ गरिएको धनकुटाका प्रहरी प्रमुख गोविन्द अधिकारीले बताए । ‘हाइवेमा जिकज्याक तरिकाले मोटरसाइकल हुइक्याउँदै अरु सवार साधनसँग ठोक्याएर आफै निउ खोज्दै दादागिरी देखाउँदै रहेछन्,’ एसपी अधिकारीले भने,‘आफु जथाभावी मोटरसाइकल हुइक्याउँदै गल्ति गर्ने अनि राजमार्गमा गाडीलाई रोकेर धाक धम्की दिदैं पैसा असुल्न खोजेको भेटेपछि पक्राउ गरेका हौं ।’
एसपी अधिकारीको नेतृत्वमा हाइवेमा गएको प्रहरीको गस्ति टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध प्रहरीले बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभद्र व्यवहार सम्बन्धि मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दायर गरेर म्याद थप गरी उनीहरुलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ ।
राकेश गुप्ता - May 10, 2021 0
भविन कार्की - May 9, 2021 0
काेरोना महामारी मानिसका लागि तनावपूर्ण बनेको छ । नयाँ रोग विषयमा डर र चिन्ता हुनु स्वभाविकै हो । विशेषगरी, बालबालिका र वयस्कमा यसले नकारातमक...
काठमाडौं । सीमा नाकाको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी अभाव भइरहेका बेला सरकारले कार्यविधिविपरीत पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्वविशिष्ट...
बिचार रबिन कटेल - February 3, 2021 0
पोखरा महानगर १ सय ५० बेडको क्वारेन्टाइन बनाउँदै
प्रदेश रबिन कटेल - March 24, 2020 0
पोखरा । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले १ सय ५० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउने भएको छ ।...
Breaking News रबिन कटेल - December 5, 2020 0
आपत्तिजनक अवस्थामा समातिए प्रहरी हवल्दार
प्रदेश २ रबिन कटेल - September 14, 2020 0
जनकपुरधाम । एक महिलासँग आपत्तिजनक अवस्थामा धनुषाका एक प्रहरी हवल्दारलाई गाउँलेले समातेका छन् । धनुषाको शहिदनगर नगरपालिका ३ यदुकोहामा आइतबार राति प्रहरी हबल्दार प्रेम...
तीन महिनाको विपद् : कूल १५५ जनाको मृत्यु, ५२ बेपत्ता
Breaking News रबिन कटेल - July 17, 2020 0
काठमाडौँ । मुलुकभर गत वैशाखयता विपद्जन्य घटनाबाट धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । मुख्य गरी पहिराका कारण अकल्पनीय क्षति भएको छ । राष्ट्रिय...
प्रदेश ५ रबिन कटेल - March 14, 2020 0
रामपुर । चैत ६ गतेबाट १७ गतेसम्म हुने यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिनबाट पाल्पामा ४८ विद्यार्थी वञ्चित हुने भएका छन् । परीक्षा...
खेल रबिन कटेल - January 22, 2021 0
ढुंगा हानेर भाग्न खोज्नेलाई प्रहरीले गोली हानेर नियन्त्रणमा लियो
प्रदेश ४ रबिन कटेल - March 8, 2020 0
नवलपुर । पूर्वी नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिका ३ कोेल्हुवामा शनिबार राति प्रहरीको गोलीप्रहारबाट एक जना घाइते भएका छन् । मादकपदार्थ सेवन गरि प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको भन्दै...
Editor-Picks रबिन कटेल - February 26, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तीन सिमेन्ट र एउटा स्टिल उद्योगलाई कारबाही गरेको छ । विभागले नेपाल शालिमार सिमेन्ट, रिलाइस सुपरटेक सिमेन्ट,...
Breaking News रबिन कटेल - July 30, 2020 0
ललितपुर । साउनको १५ गते बिहीबार खिर खाइदैछ । कुनै धार्मीक महत्व नभएपनि साँस्कृतिक रुपमा कृषि प्रधान देश नेपालमा यसको बेग्लै महत्व रहेको छ...